PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-06-10 - IZIMEMEZELO ZAMABANDLA
THE NEW MISSION JERUSALEM CHURCH IN ZION OF SOUTHERN AFRICA
KUKHUNJUZWA abazalwane baleli bandla ngenkonzo yalo ezokuba kwasithole edriefontein, ebeddeskraal, mhla ziyi-16 kujuni 2018 ngele-10 kusihlwa. Ngemininingwane shayela kwethi: 073 431 7235 noma 078 078 6133. VUKA ZULU SABATHA CHURCH ZION IN SOUTH AFRICA
KWAZISWA bonke abazalwane baleli bandla eliholwa ngulady Archbishop NC Ndwandwe ukuthi ingqungquthela yalo yabasha izokuba Kwamazala esikoleni imfundabasha Primary, emtubatuba ingena mhla ziyi-16 kujuni 2018 ngelsi 9 ekuseni.
Ngeminye imininingwane ngale ngqungquthela kushayelwa unobhala jikelele BL Gazu kwethi: 079 397 6739.
UMHLANGANO WOZALO LUKA PHAMBANA KASOMAXHAKA DUMA
Kucelwa bonke abozalo luka- Phambana kasomaxhaka Duma ukuba baphelele emhlaganweni wabo ozokuba sebhobhobho Hall nhla ziyi-16 kujuni 2018 ngele-10 ekuseni.
Izindlu ezilindelwe yilezi: Amadodana kaphambana ngumtheli, uhulumeni, udabula, umnyenyezi, uladamu, unoradu nolubhedu. Ngeminye imininingwne kucelwa bashayele umtoliki Duma kwethi: 082 958 3025 noma uphenya Duma kwethi: 083 723 3223.
KWAZISWA abazalwane baleli bandla ngenkonzo yalo yabasha ezokuba seport Durnford, empangeni mhla ziyi-16 kujuni 2018 ngele-10 ekuseni.